Lycée Victoire Rasoamanarivo – Mahajanga : harena ho an’ny firenena ny sekoly katolika | NewsMada
Lycée Victoire Rasoamanarivo – Mahajanga : harena ho an’ny firenena ny sekoly katolika
Satria hiatrika ny fanadinana BEPC, ny andiany voalohany, ao amin’ny kolejy Victoire Rasoamanarivo, Tsararano ambony any Mahajanga, amin’ity taona ity, napetraka ny ambaratonga faharoa dingana farany na lycée. Noraisin’ny paraosy mitantana azy izany fanapahan-kevitra izany mba hahafahan’ireo mpianatra manohy ny fianarana hatramin’ny fiatrehana baccalauréat.
Fianarana ao anatin’ny tontolo mendrika sy fanarahan’ny mpianatra fitsipika. Koa notokanana ny 16 avrily lasa teo, tany Mahajanga ny Lycée Victoire Rasoamanarivo. Ankoatra ireo efitra fianarana, ahitana efitrano lehibe fivoriana, famakiam-boky, informatika sy efitra ahitana ireo kojakoja samihafa ilaina ho an’ny fampianarana. Antenaina ary fa mba hisy mpampianatra mahay koa ny ao aminy.
Tombontsoa lehibe, tsy ho an’ny faritra Boeny ihany, ny fisian’ny toeram-pianarana tahaka izao fa ho an’ny firenena manontolo. Samy nilaza izany avokoa ireo olom-panjakana sy ny mpitantana ny fiangonana katolika. « Tanjona ho an’ny sekoly katolika rahateo ny mametraka harena ho an’ny firenena », hoy ny Evekan’i Mahajanga, Rakotondrajao Victor. Marihina fa sehatra iray handraisan’ny Ekar anjara lehibe eto Madagasikara, ny fampianarana manomboka any amin’ny fanabeazana fototra hatrany amin’ny ambaratonga ambony.
Maro ireo olom-panjakana nanatrika ny fitokanana niaraka tamin’ny lehiben’ny faritra Boeny, ny minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana ; Fampianarana ; Ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika ; Paositra sy ny fifandraisan-davitra. Raha ny tokony ho izy izany, tsy tokony ho latsa-danja ny any amin’ny sekolim-panjakana.